Allgedo.com » 2012 » October » 21
Home » Archive Daily October 21st, 2012
Qudbaddii ugu danbeysay ee uu AUN Jaale Siyaad u jeediyay shacabka Soomaaliyeed (Daawo waxqabadkii Kacaankii 21-ka October)
Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Dimoqraadiga Soomaaliya, isla markaana ahaa Xoghayihii guud ee Xisbigii Kacaankii 21-ka October, S/Gaas Maxamed Siyaad Barre oo mudadii 21-ka sano aheyd ee uu dalka Soomaaliya madaxweynaha ka ahaa gaarsiiyay horumar dhinacyo badan leh, ayaa nasiib daro umadda Soomaaliyeed waxay si ka fiirsasho la’aan ah si fudud u bur-buriyeen waxii uu madada dheer Kacaankii...
Xaflad lagu taageerayay Ra’isal wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdi Faarax Shirdoon oo lagu qabtay magaalada Toronto ee dalka Canada (Sawiro)
Waxaa habeennimadii Sabtida ee 20ka Oktoober 2012ka lagu qabtay magaalada TORONTO ee Dalka CANADA xaflad ballaaran oo si heer sare ah oo loo soo qabanqaabiyey, waxaa xaflada lagu qabtay Hotelka DAYS & CONFERNCE CENTRE waxaana ka soo qeyb galay dhamman qeybaha bulshada oo aan u kala harin iyadoo tirada dadkii ka so qeyb galay awgeed uu buuxdhaafay hoolkii xafladda oo meel la istaago laga waayey,...
Xaflad lagu taageerayo Ra’isal wasaaraha Soomaaliya Dr. Abdi Farah Shirdon oo October 27 lagu qaban doono magaalada Phoenix, Arizona (USA)
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Arizona ee dalka Mareykanka ayaa waxay Sabti, October 27, 2012 xaflad balaaran oo lagu soo dhaweynayo Ra’isal wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdi Faarax Shirdoon ku qaban doontaa magaalada Phoenix, Arizona ee dalka Mareykanka. Wixii faah-faahin intaas dheer ka daalaco Fler-ka hoose oo ay ku dhan tahay macluumaadka la xariira xafladda soo dhaweynta Ra’isal...
Xooghayaha joogtada ah oo dhawaan loo magacaabay xafiiska Ra’isal Wasaaraha oo maanta si rasmi ah ula wareegay xafiiskiisa (Sawiro)
Mogadisho, Somalia (AOL) – Agaasimhii hore ee xafiiska Ra’iisul wasaaraha Mudane: Cabdishakur Maxamud Climi ayaa maanta si rasmi ah xilka ugu wareejiyey Xooghayaha Joogtada ah ee dhawaan loo magacaabay Xafiiska Ra’iisul wasaaraha Dr. Faarax Cabdi Xassan waxaana xil wareejintaas goob joog ka ahaa Ra’iisul Wasaaraha, Soomaaliya Dr. Cabdi Faarax Shirdoon, Wasiiru Dowlaha Xafiiska Ra’isal...
Bandow ka dhaqan galay Kismaayo iyo hub badan oo laga helay…
Magaaladda Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa xalay waxaa ka dhaqan galay bandow bilow maqribkii kaas oo ku ekaa saakay. Bandowgan ayaa waxaa ay saraakiisha dowlada sheegeen in looga dan lahaa sugida amaanka magaaladda. Howlgalo lagu soo qabtay dad aad ubadan ayay ciidamada dowlada ka sameeyeen Magaaladda iyadoona bandowgaas uu si wanaagsan uga hirgalay Magaaladda. Dhanka kale Saraakiisha dowlada...
Amisom: Sugida amaanka Kismaayo waa howl-utaal dowlada
Taliska ciidamada Amisom ayaa war kasoo saaray falalka amaan xumada ah ee ka jira Magaaladda Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Afhayeenka Amisom Col. Cali Aadan Xaamud ayaa ka sheegay shir uu saxaafada uqabtay in ciidamada Amisom ay kaalin ka gaysteen qabashada Kismaayo lagana doonayo dowlada in ay la wareegto amaanka. ‘Amisom waxaa ay gacanta ku dhigtay Kismaayo iyo magaalooyin kale...
Safarkii Dr Gaas ee Galkacyo oo xaalad siyaasaded ka abuuray Puntland ‘Warbixin”
Ra’isal wasaarihi hore ee Soomaaliya Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas ayaa dhawaan safar ku tagay magalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, safarkiisa ayaa ku so beegmaya xili dhawaan laga filayo in Puntland ay gasho is badal siyaasadeed. Waxaana ka soo if baxayo gudaha maamul goboleedka Puntland xubno iyagu saameyn ku leh bulshadaas oo mucarad ah. Booqashada Dr Gaas ee uu dhawaantay ku tagay gobolka...
Ciidamada dowlada oo kufsi ku haya gabdhaha Marka iyo dil bareer ah oo Magaaladda ka dhacay
Magaaladda Marka ayaa waxaa ka jira dhibaato ay gaysanayaan ciidamada dowlada ee dhawaan Magaaladaas kala wareegay Shabaab. Rag katirsan ciidadamada dowlada ayaa saacadihii lasoo dhaafay kufsaday ilaa sedex gabar oo kamid ah kuwa magaaladda Marka. Shacabka Magaaladda ayaa dhigay banaanbax kadhan ah ciidamada dowlada ee kufsigaas gaysanaya. Gudoomiyaha dowlada ee gobolka Sh/Hoose C/Qadir Maxamed Ziidii...
Television-ka Somali Channel oo wareystay wariye Jamal Osman (Daawo Video)
Wariye Jamal Osman oo ka mid ah wariye-yaasha Soomaaliyeed ee heer caalami ayaa maqaal uu dhawaan qoray oo uu cinwaan uga dhigay Somali journalists are dying from corruption as much as conflict oo lagu soo daabacay shabakadda guardiannews, ayaa waxaa ka dhashay buuq badan oo dhanka saxaafadda iyo suxufiga Soomaaliyeed la xariira, gaar ahaan suxufiyiinta ka howl gala gudaha dalka Soomaaliya. Haddaba,...
Al-Shabaab oo guulo ka sheegtay dagaalo ka dhacay Sh/Hoose
Afhayeenka Kooxda Shabaab ee dhanka howlgaladda Sh Casiis Abuu Muscab ayaa war kasoo saaray dagaaladii ugu danbeeyay ee ka dhacay qeybo kamid ah goboladda Sh/Hoose iyo Jubooyinka. Abuu Muscab ayaa sheegay in ku dhawaad 5 askari oo katirsan ciidamada dowlada iyo kuwa Amisom ay ku dileen deegaanka Shalaanbood ee gobolka Sh.Hoose kadib dagaal ka dhacay. Sidoo kale Waxaa uu sheegay in askar kale oo katirsan...